Nuxurka Kulan Lagu Xaraashayo Xarunta Hubka dhigista Borama Oo dhexmaray Badhasaab Ramaaxa Togdheer, Gudoomiye Mustafe Shiinaha Awdal, Maayer Kuxigeenka Borama, Iyo Ganacsato Reer Awdal Ah | Lughaya.Com
Nuxurka Kulan Lagu Xaraashayo Xarunta Hubka dhigista Borama Oo dhexmaray Badhasaab Ramaaxa Togdheer, Gudoomiye Mustafe Shiinaha Awdal, Maayer Kuxigeenka Borama, Iyo Ganacsato Reer Awdal Ah
Added by Adal on August 18, 2017.
17 kii bisha 8aad 2017 waxa si dhuumasho ah ku yimid magaalada Borama badhasaabka gobolka Togdheer mudane Ramaax, waxaanu kulan qarsoodi ah uu layeeshay badhasaabka gobolka Awdal Mustafe Shiine, gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka Borama, mudane Asad iyo ganacsato reer Awdal ah.
Kualankan ayaa ujeedkiisa ugu wayni waxa uu ku salaysnaa sidii loo iibin lahaa xarunta hubkadhigista ee magaalada Borama. Kulankan oo ahaa mid ka dhacay guriga Badhasaabku Awdal uu deganyahay eek u dhow Seeraha Borama ayaa ahaa shir ay masuuliyiintaasi aad uga taxadireen in la ogaado ajandahiisa, hase yeeshee walaac ka yimid ganacsatadii ay rabeen in ay ka gadaan xaruntan ayaa sababay in shirkaasi uu natiijo la aan ku soo dhamaado isla markaana xogtii kulanku ay dibada u soo baxday.
Talaabadan ayaa noqonaysa markii sedexaad ee isku dayo xaga iibinta dhulka ah oo badhasaab Ramaax uu ku lugleeyahay iyada ooh ore ganacsade reer Borama ah uu ka iibiyay xaruntii maamulka Gobolka Awdal taasi oo dhalisay khilaaf ka dhex qarxa xukuumada dhexe gaar ahaan madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici iyo wasiir Cali Marexaan iyo Ramaax oo dhinac ah ilaayo hadana arintii ay u cakirantahay. Khilaafkaasi oo ka dhashay sababta loo iibinayo iyo dariiqa loo maray.
Tusaale ahaan Madaxweyne ku xigeenku isagu siyaasiyan aad uga soo horjeeday qaabka foosha xun ee iyada oo isuduwayaashii gobolka ay qaaarkood wali bilaa xafiisyo yihiin hadana la gadayo dhulkii iyo guryihii dawlada, waxana kale oo uu aad ugu dhaliilay Ramaax iyo Cali Mareexaan hadiiba la iibiyay maxaa umada si cadaaalad ah xaaraashka hantidan loogu soo ban dhigi waayay ee gudida qandaraasyada qaranku ay arintan u maamuliwaayeen, kadibna lacagta loogu shubiwaayay qasnada dawlada.
Waxa xusid mudan in ay nu tilmaamno wakhtigaa hore in iibinta xaruntaasi ay gaadhay heer ay abuurto cadaawad beelaha wada degan magaalada Borama ee walaalaha ah kuwaasi oo siyaabo kala duwan u arkayay iibka xaruntaasi gobolka isla markaasina warbaahinta hadalo deel qaaf ah isku marinayay.
Badhasaab Ramaax maa daama uu Togdheer gudoomiye gobol hada ka yahay, ma waxa uu arki waayay dhulka danta guud ee magaalada Burco oo 100%100 ka badan dhulka danta guud ee Borama ? Jawaabtu waa maya balse Burco kama yeelayso dhul danguud ah in uu si fudud u iibiyo waayo waa meel dadkeedu ay yihiin dad fekeraya oo soo jeeda, sidaadarteed ayuu u noqday mid ku soo noqnoqda Borama, Somaalidaaa hore ugu maahmaahday Dacawo meel ay macal ku dhadhamisay macaluul ayay ugu dhimataa.
Sikasta ha ahaatee hadiiba uu isku daygan kale ee iibinta xarunta milatariga ee hubka dhigista Borama ay dhacdo waxa dadbadani iswaydiinayaan horta xukuumada KULMIYE ma waxa ay rabtaa in ay dalkan qas ka abuuraan iyo iska hor imaad bulsho. Arimahaasi oo halis galin kara nabadgalyada dalka